RASMI: European Super League Oo Warbixin Soo Saartay Ka Dib Markii Ay Kooxihii Premier League Ka Wada Carareen - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: European Super League Oo Warbixin Soo Saartay Ka Dib Markii Ay Kooxihii Premier League Ka Wada Carareen
Madaxda tartanka cusub ee European Super League ayaa soo saaray bayaan ka dib go’aankii ay lixda kooxood ee ugu waa weyn Premier League uga laabteen ka mid noqoshada horyaalkaan iyagoo bayaankooda ku sheegay in loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo kubada cagta.
Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea iyo Tottenham ayaa dhamaantood ku dhawaaqay inay isaga baxeen tartankaan muranka badan dhaliyay ka dib markii ay cambaareyn xoogan kala kulmeen dunida kubada cagta.
Waxay taasi keentay in qorshihii European Super League uu noqdo mid burburay laakiin madaxada European Super League ayaa ku adkeysanaya inay weli doonayaan in isbedel lagu sameeyay hanaanka dhismaha kubada cagta Yurub inkastoo ay qirteen inay haatan u baahan yihiin inay dib u qaabeyn ku sameeyaan qorshahooda.
Bayaanka ay soo saareen ayaa lagu yiri: “European Super League waxaa ka dhaadhacsan in loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo kubada cagta Yurub.
“Waxaan soo jeedineynaa tartan cusub oo Yurub ah sababtoo ah nidaamka haatan dhisan ma ahan mid shaqeynaya.
“Inkastoo ay kooxihii Ingariiska ka baxeen European Super League oo lagu qasbay inay go’aankaan qaataan ka dib cadaadis la duldhigay, waxaa inaga dhaadhacsan in hindasaheena uu yahay mid si buuxda u dhowraya sharciyada Yurub sida aan ku cadeynay maanta maxkamada.
“Anigoo eegeyna xaalada haatan taagan, waxaan dib uga fiirsan doonaa inaan qaadno talaabooyinka ku haboon ee aan dib ugu habeyn ugu sameyneyso hindisaheena, iyadoo hamigeena uu yahay inaan taageerayaasha u soo bandhigno tartanka ugu xiisaha badan ee dhaqaalaha ugu fiican soo gelinaya bulshada kubada cagta.”